Ukuzilungisa intshebe - Ukunakekelwa nokwelashwa okuhle kakhulu | Amadoda aSitayela
Uma uthathe isinqumo ube nentshebe noma uqale ukuyinakekela Ngakho konke ukunakwa kwabo, lapha sikunikeza ukunakekelwa okuyinhloko ukuze kube okungenacala. Uma ngemuva kwesondlo esihle uthatha isinqumo sokwenza amalungiselelo amahle, uzokwazi nokwazi konke odinga ukuba nakho una intshebe ubukhazikhazi.
Ukwenza ilungiselelo elihle entshebeni yakho kuzofana nokuthi nikeza ukubukeka okuhle, ukuthi uyakwazi ukuzinakekela futhi lokho kubonakala ngokubukeka okunempilo nokuhlanzekile. Kodwa-ke, intshebe enhle iqala ngokuthi ungayilungisa kanjani inabantu abaningi futhi iphilile, ungayinakekela kanjani nokuthi kufanele siyichaze kanjani ukuze ibukeke kahle kakhulu.
1 Ungazithola kanjani izintshebe ezigcwele
2 Ukunakekelwa kwentshebe okukhethekile
3 Ukubumba intshebe
4 Ukuthinta kokugcina
Uma inhloso yokuqala kungukuthi yiba ne- intshebe enamahlathiKufanele wazi ukuthi lesi yisinyathelo sokuqala. Kungani unentshebe egcwele? Ngoba luphawu lobungqabavu futhi abantu abaningi bathola lowo muzwa wokukhulu ubudoda, amandla, ubuholi. Kepha ukuzama ukuba nentshebe egcwele okokuqala kungaba nzima uma sikuzama kuqala.
Kuyiqiniso ukuthi intshebe ikhula njengomphumela weminyaka. Umuntu osemusha ofuna ukuba nentshebe egcwele uzombiza ngeminyaka yokuqala futhi kuzodingeka anikeze isikhathi ukuthi anikeze leyo miphumela. Kepha kukhona abesilisa okungenzeki lokhu kubo futhi banezintshebe ezinhle kakhulu okokuqala.
Kufanele ukhule intshebe okungenani inyanga ngaphandle kokuthinta kabusha, ukuze ikhule iqonde futhi iqine. Uma ukulunywa okuningi kwenzeka ngesikhathi sokukhula kwaso ungasebenzisa i- uwoyela okhethekile ukucasula nokushaya. Kulabo bantu abafuna ukubukeka njengentshebe enkulu futhi asebekhulile, bangaphendukela kuyo odayi ukudala ubungqingili obuningi.
Ukunakekelwa kwentshebe okukhethekile
Umqondo wokunakekelwa kwenzelwa ibukeka iphilile futhi ikhanya. Intshebe nayo kufanele igcinwe ihlanzekile futhi kulokhu kufanele siyigeze ngensipho ekhethekile. I-shampoo yokugeza ayifanele thina, ngoba ayicaciseli le njongo futhi ingalimaza isikhumba.
Sizomasaja kahle izinwele ngensipho bese sizomisa ngethawula elithambile. Zonke izinsalela ezikhona kungenzeka zisuswe yenhlabathi nezinhlayiya kuwo wonke amakhona. Kungasetshenziswa ekugcineni isilondolozi esikhethekile Izolungisa i-cuticle eyonakele. Kuzosetshenziswa ingxenye encane futhi ibhucungwe ngobumnene ukuthola umphumela obushelelezi, ocwebezelayo.
Amafutha esilevu Ngomunye wemikhiqizo ongayithatha ngezikhathi ezithile ukondla izinwele kuze kube sezingeni eliphezulu. Ungasisebenzisa ukufaka futhi isikhumba emanzini. Njengoba sibuyekezile phambilini kuzothambisa izinwele ukuze kungabikho ukunwaya futhi kuzondla izintambo zezinwele ukuze zikhule ziphilile kakhulu.
Ibhalsamu futhi umkhiqizo wokusetshenziswa. Ungayiphatha ephaketheni lakho ukuze ukwazi ukuyisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi. Inhloso yalo kuzoba ukuthi intshebe ifakwe amanzi, ibe nokubukeka okunempilo futhi ukuze kubonakale sengathi iyajiya kakhulu.
Ukuqala ukuchaza nokusika intshebe yakho, kufanele ubheke okuhle umshini wokusika izinwele. Lezi nsingo zinenkululeko yokuzilungisa zisuke ku-2mm ziye ku-6mm. Kungcono ukuqala kusuka ebangeni elide kakhulu ukuze uqede uye ngasekufushane.
Kufanele ume phambi kwesibuko futhi bona ukulinganisa ofuna ukukufeza. Uzoqala ukufuna leyo eqala kusukela ekhaleni ezinhlangothini zombili zobuso noma ngasezindlebeni. Izingxenye zezihlathi kufanele zigundwe.
Uhlangothi lwentshebe Kumele igundwe kahle futhi igobile ibheke endlebeni. Sizomaka umugqa wokulungisa phakathi kwezindlebe zombili ubheke emhlathini. Kufanele usike kahle ngomshini uze uthole ubude obufunayo. Uma unentshebe ende kakhulu futhi ungafuni ukususa ubude, ungazisiza ngesikele esihle.
Ekugcineni, ungakhohlwa izibiliboco, kufanele wenze ukusika okuhle okuqondile nokuqondile phakathi kwethempeli nendlebe, okuphele kahle kuze kufike esilevini. Futhi ungakhohlwa ingxenye engezansi yentamo, kufanele ushiye leyo ndawo igcwele kahle ukuze ithambe emehlweni.
Ukuqedela ukulungisa intshebe kuzofanele ulandele le mininingwane yokugcina. Uma usugunde ezinye zezindawo ongazithatha ukhilimu esikhunjeni ukugwema ukubomvu okungenzeka. Kunokhilimu abaningi abashefi emakethe futhi ngaphandle kokungabaza okuhle kunakho konke esikhunjeni sakho ngokususelwa ku-aloe vera.
Unganikeza ukuthinta kwe- ukuthamba nokukhanya kwentshebe yakho nebhalsamu echazwe ngenhla. Kepha uma into yakho ukulungisa intshebe ungasebenzisa imikhiqizo ekhethekile ye ukulungiswa kwentshebe. Ngokhilimu abaminyene abasuselwa kuma-wax ukuze ukwazi ukubamba okulingene ukuya ezingeni eliphakathi, yebo, ngokubukeka kwe-matte. Ukusebenzisa le fixative kuzosiza ukulawula izinwele ezingalawuleki futhi kusize ukwakhiwa kwezindawo ezingalawuleki.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ukuzilungisa intshebe